सात गल्ती, जसले मधुमेहको रोगी बनाउँछ « Anumodan National Daily
सात गल्ती, जसले मधुमेहको रोगी बनाउँछ
प्रकाशित मिति : ९ भाद्र २०७४, शुक्रबार ०५:४४
मधुमेह किन हुन्छ ? यसको एउटा मात्र जवाफ छैन । अनेक कारणले मधुमेह हुन्छ । खासगरी अस्वस्थ्य खानपान र अस्तव्यस्त जीवनशैली, यसको मुल कारण हो । हामी जीवनयापनका क्रममा कति गल्ती गरिरहेका हुन्छौ, जसले मधुमेहको जोखिममा पार्छ । के हुन् त ति गल्ती ?
राति अबेरसम्म बस्नु
राति अबेरसम्म बस्ने, पर्याप्त निन्द्रा नलिने, रातभर जागा बस्ने, चुरोट सेवन गर्ने, रातको समयमा भोजन गर्ने जस्ता बानी छ भने त्यसले मधुमेहको जोखिममा पार्छ ।
शरीरमा भिटामिन ‘डी’ को कमी भएका मानिसहरुलाई टाइप-२ मधुमेहको खतरा अधिक हुन्छ । खासगरी घाममा नबस्ने व्यक्तिहरु यसको जोखिममा परेका छन् । घाम भिटामिन डिको प्राकृतिक स्रोत हो ।
बढी आरम गर्ने
पूरै दिन बसेर काम गर्नु त हुन्न ? अफिसमा झण्डै आठ घण्टा बसेरै काम गर्ने र घरमा गएर पनि टिभीमै दिन व्यतित गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुलाई पनि मुटुरोग तथा मधुमेहको जोखिम बढी हुनसक्छ ।
अत्याधिक मात्रामा रिफाइन्ड कार्वोहाइड्रेटको प्रयोग
सेती प्रयोगशालामा थप ७ जनामा कोरोना पुष्टि, दुई जनाको मृत्यु
धनगढी । सेती प्रादेशिक अस्पतालको प्रयोगशालामा सोमबार थप ७ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ
पछिल्लो २४ घण्टामा शून्य परिक्षण
धनगढी । पछिल्लो २४ घण्टामा सेती प्रादेशिक अस्पतालमा शून्य पिसिआर परिक्षण भएको छ । स्वाव
कैलालीमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या जटिल
धनगढी / सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलालीमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या जटिल बन्दै गएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन ।